Monday September 13, 2021 - 12:34:22 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wadanka Itoobiya waxaa dib uga qarxay dagaalladii cuslaa ee udhaxeeyay ciidamada Federaaliga Xabashida iyo maleeshiyaadka qowmiyadda Tigreega.
iska hor'imaadyadii isbuucyadii lasoo dhaafay ka dhacayay gobolka amhara ee dhaca galbeedka itoobiya waxaa ku gacan sarreeyay cidiamada federaaliga kuwaas oo dhowr magaalo dib uga qabsaday maleeshiyaadka TPLF.
dagaallo culus oo dhacay 24kii saac ee lasoo dhaafay ayaa sababay in melleteriga abiy axmed dhabarka laga jebiyo islamarkaana dib looga qabsado dhowr magaalo.
afhayeen melleteri oo u hadlay maleeshiyaadka qowmiyadda Tigreega ayaa sheegay in ciidamadoodu ay dib uqabsadeen magaalooyinka kala ah Saakoota iyo Joona wuxuu intaas ku daray in ay maxaabiis ahaan uqabteen boqolaal askari oo ubadan amxaaro, marka lagasoo tago sheegahada TPLF ee guulaha waaweyn mas'uul sare oo katirsan dowladda itoobiya ayaa xaqiijiyay dib ugurashada ay sameeyeen ciidamadooda.
Sarkaal uhadlay ismaamulka gobolka Amhara ayaa telefeshinka Aljazeera u sheegay in ciidamada melleetriga itoobiya ay dib uga gurteen dhowr magaalo oo isbuucyadii lasoo dhaafay ay ka eryeen fallaagada tigreega.
"ciidamada melleteriga itoobiya waxay isaga insixaabeen degmooyin iyo deegaanno ay isbuucii lasoo dhaafay ka eryeen kooxaha fallagada TPLF mana naqaan sababta ay sidaas uyeeleen" ayuu yiri sarkaal uhadlay ismaamulka amhara.
Wakaaladaha wararka reergalbeedka ayaa soo wariyay intii ay Tigreegu wadeen gulufka dib uqabsashada magaalooyinkan ay geysteen xasuuq bashac ah kaas oo ay kula kacen dad kasoo jeeda qowmiyadda amxaarada.
Saraakiisha tigreega waxay ku faaneen in ay kala daadiyeen kumanaan askari oo iyagoo aad uqalabaysan lagusoo daadiyay jiidda dagaalka magalada diisis.
Madaxweynaha ismaamulka Tigray ayaa ugu baaqay ciidamada Federaaliga ah ee ka dagaallamaya gobolka Amhara in ay isku dhiibaan kuwa TDF "waa in aad isku dhiibtaan ciidamadeenna udagaallamaya sidii nabad loo heli lahaa xal kale idiinma furna sidaas waxaa yiri hoggaamiyaha TPLF.
Dagaalladan aadka uculus ee dib uga qarxay galbeedka itoobiya ayaa yimid laba maalmood kadib markii ay dadka itoobiyaanka ah udabaal degeen sanadkooda cusub islamarkaana uu Abiy axmed ballan qaaday in uu feyllaha ka goyn doono kuwa doonaya in ay kala daadiyaan heybadda itoobiya sida uu hadalka udhigay.
dagaalka sokeeye ee itoobiya ka holcaya ayaa dhowaan sanad jirsan doona mana muuqdaan astaamo colaadda lagusoo afjari karo, waxa loogu yeero beesha caalamka oo reergalbeedku ugu horreeyaan ayaa ka walaacsan in colaaddii kasoo bilaabatay gobolka Tigray ee waqooyiga dhaca ay gallaafato nolosha malaayiin ruux
Sarkaal katirsanaa Booliska Kenya oo lagu qafaashay magaalada Nairobi.
Dowladda Itoobiya oo Maleeshiyaada TPLF ugu baaqday isdhiibid.
Mas'uul katirsan Imaarada Islaamiga ah oo beeniyay been abuur laga faafiyay.